फेरिँदै ग्रामीण बजार- प्रदेश १ - कान्तिपुर समाचार
फेरिँदै ग्रामीण बजार
जेष्ठ ३१, २०७५ अर्जुन राजवंशी
दमक — गौरादह नगरपालिकाले नगरको मुख्य बजार ‘गौरादह’ लाई व्यवस्थित र आकर्षक बनाउने भएको छ । यसका लागि नगरपालिकाले विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाएर बजार निर्माणको काम थालेको छ ।
बजार व्यवस्थित नहुँदा सडक किनारमा व्यवसाय गर्न वाध्य झापाको गौरादह बजारका व्यापारी । तस्बिर : अर्जुन
वडा नं. १ मा रहेको गौरादह बजार जिल्लाको पुरानो बजार हो । बढ्दो जनघनत्वसँगै बजार क्षेत्र अव्यवस्थित र साँघुरो बनेको छ । बाटो काटेर १३ कट्ठा जमिनमा बजार लाग्दै आएको छ । बजार साप्ताहिक रूपमा आइतबार र बिहीबार लाग्ने गरेको छ ।
बजारमा व्यवस्थित टहराका ब्लक, ड्रेन, पार्क, आकर्षक पानीका फोहोरा, गार्डेन, पार्किङलगायतका भौतिक संरचना निर्माण गर्ने गरी डीपीआर तयार पारेको नगरपालिकाका सब इन्जिनियर प्रेम बास्कोटाले जनाए । उनले डीपीआर अनुसार बजार निर्माणमा कुल दुई करोड ११ लाख २५ हजार रुपैयाँ खर्च लाग्ने छ । बजारमा व्यापारीका लागि पसल राख्न व्यवस्थित १३ वटा टहराका ब्लक निर्माण गरिने छ । टहरा निर्माणमा एक करोड ४४ लाख १७ हजार २ सय ७१ रुपैयाँ लाग्ने बाँस्कोटले जानकारी दिए ।
बजार क्षेत्रको चारैतिर ढल व्यवस्थापन हुने गरी ड्रेन निर्माण गरिने छ । ड्रेनका लागि ३२ लाख ३९ हजार ५ सय २० रुपैयाँको स्टिमेट गरेको बाँस्कोटाले बताए । बजार निर्माणका लागि माटो पुरेर ब्रिक्स सोलिङ गरिने डीपीआरमा उल्लेख छ । डीपीआरअनुसार बजार क्षेत्रमा माटो पुर्न १९ लाख ६८ हजार ३ सय रुपैयाँ बजेट लाग्नेछ । डीपीआरअनुसार थोक बजार, खुद्रा बजार, मासु, माछा, फेन्सी बजारलाई व्यवस्थित गरिनेछ । बजार निर्माणका लागि गौरादह बजार व्यवस्थापन समितिले केही समयअघि बजार क्षेत्रमा रहेका रुखहरू काटेको थियो । बजार निर्माणको काम सुरु गरेको वडा नं. १ का वडाध्यक्ष नगेन्द्र भण्डारीले बताए ।
बजार निर्माणमा लाग्ने बजेटको व्यवस्था नगरपालिका र प्रदेश सरकारबाट गरिने भण्डारीले बताए । ‘नगरपालिकाको ३० लाख बजेटबाट हामीले बजार निर्माणको काम थालेका छौं’ भण्डारीले भने, ‘बाँकी बजेट प्रदेश सरकारसँग अनुरोध गरेर ल्याउने तयारी गरेका छौं ।’
गौरादह जिल्लाको दक्षिण पश्चिम क्षेत्रहरू गौरादह, बैगुन्धुरा, महारानीझोडा, कोहबरा, जुरोपानी, कोरोबारीको मुख्य बजार हो । उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष जीवन राईका अनुसार गौरादहमा दर्ता भएका दुई हजार ४ सय व्यवसायी छन् । ‘बर्खाको समयमा पसल थाप्न निकै सकस हुने गरेको छ’ राईले भने,‘बजार निर्माणपछि व्यापारीले बाह्रै महिना सहज रूपमा व्यापार व्यवसाय गर्न सक्छन् ।’ उनले बजारलाई पर्यटकीय हिसाबले पनि निर्माण गर्ने गरी डिजाइन गरेकाले आगामी दिनमा गौरादहको व्यापारले फड्को मार्नेमा विश्वस्त रहेको बताए ।
प्रकाशित : जेष्ठ ३१, २०७५ ०९:२६
भएन समयमा काम
जेष्ठ ३१, २०७५ दीपेन्द्र शाक्य
संखुवासभा — प्रतिनिधिसभाका सांसद राजेन्द्र गौतमलाई टुटेदेउरालीबाट मुढेसम्मको दस किलोमिटर कालोपत्रे सडकमा यात्रा गर्न दुई घण्टा लाग्यो । काठमाडौंबाट तुम्लिङटारको उडान अवरुद्ध भएपछि विराटनगर हुँदै गौतम टुटेदेउराली आएका थिए ।
कालोपत्रे सडक हिलाम्मे भएपछि गाडी भासिएको उनले बताए । ठेकेदारले समयमै काम नगर्दा सबैले दुख पाउनु परिरहेको उनले बताए । सदरमुकाम खाँदबारी आएपछि सडकको विषयमा उनले ठेकेदार र प्रशासनबीच छलफल समेत राखे । काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउन उनले प्रजिअलाई निर्देशन पनि दिए ।
यो वा त्यो बहानामा विकास निर्माण अवरोध गर्ने ठेकेदारलाई छाड्नेवाला छैनौ, उनले भने, ‘कामको गति अघि बढेन, असारमसान्तसम्मको गतिविधिका बारेमा साउन पहिलो साता छलफल गर्ने छांै, उनले भने, ‘सबै ठेकेदार कम्पनीलाई प्रगति बिवरण लिएर आउन भनेका छौं । त्यो बेला पनि कामको गति नभएको पाईए हदैसम्मको कारवाही हुनेछ, उनले भने, ‘जिम्मेवारी लिएपछि काम समयमै सम्पन्न हुनुपर्छ, ठेकेदारको लापरबाहीले सर्वसाधारणले दु:ख र कष्ट पाउनुभएन ।
धर्मदेवी नगरपालिकाको तामाफोकमा पर्ने टुटे देउरालीबाट मुढेबजारसम्मको १० किलोमिटर सडकमा यात्रुले सास्ती खेपिरहेका छन् । यो सडक ७ वर्षअघि कालोपत्रे गरिएको थियो । त्यस यता तुम्लिङटार सडक डिभिजन कार्यालयले पटकपटक मर्मतसंभार गरे पनि झाराटार्ने काम मात्रै भएको उनले आरोप लगाए ।
७ वर्षअघि सडक कालोपत्रे हुँदा खुसी थियौं, अहिले गाडी चढ्न पाएका छैनांै, सबैतिर हिलैहिलो छ, धर्मदेवी नगरपालिकाका प्रमुख रमेश जिमीले भने, ‘ठेकेदारको कमीकमजोरीले सबैले दु:ख पाएको छ । कालोपत्रे भएको ७ वर्ष नबित्दै हिलाम्मे सडकमा परिणत भएपछि १० किमि आवतजावत गर्न घण्टौं लाग्ने गरेको गुनासो गरे । सडक राम्रो हुँदा पहिले १५ मिनेट लाग्थ्यो, अहिले पुरै २ घण्टासम्म लाग्छ उनले भने, ‘टुटेदेउरालीसम्म पुग्न कम्तीमा २० ठाउँ उत्रिनुपर्छ, सामान हराउने व्यथा पनि त्यतिकै छ । सडकमा गरिएको कालोपत्रे असिना र पानीले बगाएपछि सडक पुरानै अवस्थामा फर्केको हो ।
सडक मर्मत गर्न तुम्लिङटार सडक डिभिजन कार्यालय, धनकुटा सडक डिभिजनमा मात्रै नभई मन्त्रालयसम्म पुग्दा पनि सुनुवाई नभएको स्थानीय देवराज सुबेदीले गुनासो गरे । कालोपत्रे सडक हिलाम्मे हुँदा यात्रुलेमात्रै दुख र सास्ती भोगेका छैनन् । हिलो पनि ५ फिटसम्म गहिरो छ, जताततै गाडी भासिन्छ, उनले भने, ‘मिलेर ठेल्छौं र निकाल्छौं । सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मीको दिनचर्या पनि फेरिएको छ ।
सुरक्षाका लागि खटिएका प्रहरीको काम यतिखेर सडकमा भासिएका सवारीसाधन ठेल्ने र निकालेर सदरमुकाम खाँदबारीसम्म पठाउने भएको छ । २ वटा प्रहरी चौकीमा रहेका दुई दर्जनमध्ये २० जना प्रहरीको दिनचर्या २ महिनायता फेरिएको छ ।टुटेदेउरालीबाट मुढेसम्मको कालोपत्रे सडक हिलाम्मे भएपछि २० ठाउँभन्दा बढी स्थानमा सवारीसाधन फस्छ । सवारीसाधन फस्नासाथ प्रहरीलाई यात्रुले खबर गर्छन् र मद्दत लिन्छन् । सुनसरीको धरानबाट मुढे, चैनपुर हुँदै खाँदबारीसम्म दैनिक ११ वटा यात्रुबाहक बस आउँछ भने यी बजारका लागि दैनिक उपभोग्य सामग्री दिएर १ सय बढी ट्रक, ट्याक्टर र साना सवारीसाधन गुड्छन् ।
जिल्ला प्रहरीका डीएसपी श्यामकुमार सारुमगरका अनुसार प्रहरी चौकीमा आउने सेवाग्राहीका लागि २ जना कार्यालय बस्छन्, अरु सबै सवारीसाधन ठेल्न र निकाल्न जान्छन् । शान्ति सुरक्षा र अपराध नियन्त्रण बाहेक सवारी आवागमनलाई सूचारु गर्न पनि गाडी ठेल्नै पर्छ, उनले भने, ‘सडकको अवस्था एकदमै खत्तम छ । एक ठाउँ मात्रै बिग्रिएको छैन, उनले भने, ‘प्रहरी गाडी फसेको स्थानमा डोरी, झ्याम्पल र गैंती बोकेर हिंड्छ । कालोपत्रे एकै ठाउँ पनि देखिंदैन, टुटेबाट मुढेसम्मको सडक खण्ड पुरै हिलाम्मे छ, उनले भने, ‘लगातारको झरीले साह्रै समस्या पारेको छ, यात्रु भनेको समयमा गन्तव्यमा पुग्दैनन् ।’
यो सडक खण्डमा ५ फुट गहिरो हिलोमा गाडी भासिएपछि प्रहरीसँग सहकार्य गरेर बस व्यवसायी झम्पल, कोदालो र फरुवाको सहायताले यात्रीको सहयोग लिंदै धरानबाट चैनपुर आइपुग्ने गरेका छन् । त्यसबाहेक खाँदबारी, चेवा, धुपु, शीत्तलपाटी, हेलुवाबेसी, बाह्रबिसे, बाना सडक खण्डमा पनि प्रहरीको दायित्व थपिएको छ ।
प्रकाशित : जेष्ठ ३१, २०७५ ०९:२५